Iiparati zeKarate-Chop ziNdlela eyoyikekayo yoyilo - Uyilo Lokuphefumlela
Iiparati zeKarate-Chop ziNdlela eyoyikekayo yoyilo
JONGA ukufotaImifanekiso kaGetty
Molweni, bafundi abathandekayo. Sele ziveki ezimbalwa okoko ndikuqhubile ngezimvo eziphikisanayo ngezinto ozithandayo iiplani zomgangatho ovulekileyo kwaye amabinzana angathethiyo kwiimpawu zangaphakathi. Kulungile, ndibuyile. Kwaye ndibuyile ukuze ndithethe ngenye yezona zinto zakha zabuhlungu kwezakha zenzeka kwihlabathi loyilo, enye esahlulahlulo loshishino namhlanje: i-karate-chop pillows.
Kudala ndiyicaphukela ikarati-chop (njengaye nawuphi na umntu onamehlo), kodwa ukuthanda kwam kubuyiselwe kule mpelaveki ngelixa ndisehotele nomhlobo wam. Xa sasiphuma kwigumbi lehotele, sathi umhlobo-ukuba angabizwa njalo-uqhubeke wasukuma esofeni, wajonga ngakumqamelo omsulwa, ongalindelwanga, wehla kuwo ngamnye ngesilayi esibukhali sesandla sakhe esoluliweyo.
Oh hayi, Ndizicinge ndodwa xa ndicinga ubunyani bale meko. Umhlobo wam ungumgawuli wekarati.
Ukuba ufunda iimagazini zoyilo lwangaphakathi ngeminyaka yoo-1980, usenokuba uqhelene nolu hlobo: indlela yokulungiselela ukuphosa imithwalo engatyibilikanga imema ukugqibelela, kodwa isikwe ezantsi embindini ukuze iikona zazo eziphezulu zincamathele njengendlebe zenja enovalo. . Ngokungafaniyo neendlela ezithile ze-80s I ngekhe Ingqondo yokuba ujikeleze (hello taffeta, chintz, kunye namakhethini amnandi), lo ukoyisile ukwamkelwa kwakhe.
Ngethamsanqa, andindedwa ndedwa ngombono wam. Kudliwanondlebe kunye Ukuhonjiswa kwe-Elle kule ntwasahlobo, umyili ohloniphekileyo uJan Showers ubize ikarati-chop kuye 'njengeyona nto ayithandayo ukuyiphepha,' esitsho into eqinisekileyo ukuba uninzi lwabaphambuki bePinterest bacinga: 'Andikholelwa ukuba ndisabona imiqamelo eqatywe ikarati ngo-1982.'
Kulungile uJan, nam andinako ukusilela ngokupheleleyo ukuqonda ukuba kutheni ukubonakala komqamelo wokuhombisa kutyhafile ngesiqingatha ubude, ngaloo ndlela kugqwetha nayiphi na iphethini kuyo kungasaziwa ukudideka, nokuba loluphi na uluvo lwendlu yangaphakathi eyakhiwe kakuhle. Ngenxa yothando lukaThixo, yintoni le yenziwe ngumqamelo amahlwempu kuwe? Zitshintshe ngokulula kwaye ubayeke-ndithembe, ikhaya lakho liya kujongeka ngcono ngenxa yalo.
UHadley Keller UMlawuli weDijithali UHadley Keller ngumbhali kunye nomhleli oseNew York, egubungela uyilo, izinto zangaphakathi kunye nenkcubeko.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
Iingcamango zelizwe laseKhikhi ezivela kwi-Ina Garten
Ii-Gnomes ze-Ista ziNtlobo yokuhombisa kweNtwasahlobo esingakhange sikubone ukuza
ISIQINISEKISO-19: Ngaba kufanelekile ukuba usulele kwiPosi yakho?
Ukwenziwa kweGumbi leNdwendwe elincinci-Ingcebiso kwigumbi lokulala elincinci kunye neengcebiso
Uyinyusa njani i-Checycle Chest yeeDraw ngePeyinti yeNgwe yokuPrinta
Ngaba awukwazi ukulala? Iindlela ezili-10 zokuLungiselela igumbi lakho lokulala ukuze uncede ulale ngcono
UHeather Rae oselula ucacisa ukuba 'Ewe Mnumzana, Mnu El Moussa' kuthetha ntoni
Izindlu ezingama-43 ezivela kwiiMuvi kunye neMidlalo yeTV onokuyindwendwela
Jonga iifoto zeNdlu ezintle zika-Eric noJessie James Decker
Iindawo zokuHamba eziHlelekileyo zeHalloween eziLaleleyo zokuLala ngo-2018 - Izinto ekufuneka uzenzile kwindawo yokulala
U-Etsy uthengisa eyona nto inqabileyo yesinxibo sePancake yekati yakho
I-11 yeeMibala eziPeyinti eziGqwesileyo, ngokukaBayili
ikhitshi elibuyela umva itayile yangaphantsi
iitafile ezincinci zasekhitshini zangoku
Izimvo zokutya zeHalloween zabantu abadala